Resaky ny mpitsimpona akotry : diso aoriana loatra ka masisosiso ho fihetsiketsehana fotsiny | NewsMada
Harem-be ireo vatan-kazo naondrana an-tsokosoko nanamelohan’ny fitsarana any Singapour an’ilay Sinoa notazoniny ho tomponandraikitra voalohany tamin’ny fanatanterahana io asa maloto io. Efa henatra vokatr’izany fitsarana izany ny fampitanjahana momba ny fisian’ny goragaro eto an-toerana. Ny any ivelany indray no mailomailo alohan’ny tompony izay manaiky ho fitahan’ireo tambajotra fantatra fa mitsetsitra ny harem-pirenena. Tsy vitan’izay anefa fa raha nangataka fanazavana ny fitsarana any Singapour ahafahana mamantatra na tena izy na sandoka ireo antontan-taratasy fanomezan- dalana tamin’ny fanondranana ireo bolabolan’andramena miisa aman’alina, dia mbola nitarazoka indray ny fitondrana teto an-toerana. Angamba lany andro tamin’ny fandalanjalana ny mety ho vokatry ny filazana ny marina sy ny fanafenana izany. Nivoaka ny didim-pitsarana ny farany. Izao vao taitra ka nametraka fitarainana eto amin’ny fitsarana Malagasy ho fanenjehana an’ireo mpitsikombakomba mikasika ny taratasy sandoka nahafahana nanatanteraka ilay fanondranana an-
tsokosoko. Tsy efa ela tamin’ny fotoana nanambaran’ny Praiminisitra fa voarara ny fanondrana hazo sarobidy nanomboka tamin’ny taona 2010 ve dia efa fara-faharatsiny no tokony nametraka izany fitarainana izany ny fanjakana malagasy. Ny anton’ny fahamaimaizana amin’izao fotoana izao dia ny hahazoana migeja io harembe io. Gejaina ahoana moa ? Firifiry izay ny bolabolan’andramena no gejaina, niha-nanify am-pitoerana izay nangonona, toy ny tantely vaky, tsy hita ifampitazonana. Rehefa lany ny rariny, ny kely sisa nanamborana no hany afaka sitrahana ara-dalàna.
Noderaderaina toy izany anefa izany harena voajanahary mivangogo eto amin’ny Nosy izany. Mihamanify isan’andro ireo harena ireo noho ny fitantanana tsy raitra na eo aza ny fandokafan-tenan’ireo mpitondra nifandimby. Tsy nisy nahavita ho laharam-pahamehana ny fiarovana ny harem-pirenena. Ny harena voajanahary mihamanify isan’andro, ny mponina tsy niainga avy eo amin’ny fahantrana, rehefa lany vatsy indray ve ny tany vao antenaina afaka hameno kibo ny vahoaka ? Sarotra izay.